Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika - Awdinle Online
Kooxo Burcad Koonfur Afrikan ah ay ayaa waxaa Gudaha dalkaas ay ku dileen Muwaadin Soomaliyeed oo Ganacsi ahaan u tegay, iyaga oo la sheegay in dilka kadib ay kooxaha Burcadda ah goobta ka baxsadeen.
Muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi jiray Cabduqaadir Cumar Cali Biyeey, ayaa Kooxaha hubeysnaa waxaa ay dhowr xabadood ku dhufteen xilli uu marayay Bartamaha Suuq ku yaal Xaafadda Soomaalida u badan tahay ee Bellville oo ku taalla Magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika.
Goobjoogayaal, ayaa sheegay in dablayda dilka gaysatay ay ka qaateen Boorso uu sitay, iyagoo si deg dega uga cararay goobta, waxaana intaasi kadib tegay Ciidamo ka tirsan booliska dalka Koonfur Afrika, in kastoo aysan ku guuleysan inay gacanta ku dhigaan.
Mid kamid ah Soomaalida ku nool Soomaalida ay ku badan tahay ee Bellville oo ku taalla Magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in walwal xoogan uu soo wajahay kadib markii dhowrkii malmood ee la soo dhaafay sibareera ah loo dilay Soomaali farabadan.
Dalka Koonfur Arfrika ayaa waxaa sanadkaan 2021 ku batay dilalka loo geeysanayo Soomalida, waxaana todobaadkaan gudihiisa dalka Koonfur Afrika lagu dilay 6 muwaadin oo Soomali ah, halka tiro kale lagu dhaawacay.
Previous articleMaamulka Gobolka Banaadir oo ka shiray sugida Amniga Imtixaanaadka Shahaadiga
Next articleDagaal Guryo lagu gubay oo ka dhacay duleedka Beledweyne